‘यस्तो राजनीतिक चरित्रले समाजवाद आउँदैन’
अन्तर्वार्ता/विचार आइतबार, साउन १२, २०७६
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरि, नेकपाका नेताद्वय घनश्याम भुसाल र राम कार्कीले वर्तमान राजनीतिक चरित्रले समाजवाद नआउने बताएका छन् ।
पाठशालाले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा समाजवाद : एक विमर्श’ कार्यक्रममा उनीहरूले वर्तमान सरकारको गतिविधि समाजवादी उन्मुख नभएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले अहिलेकै पाराले मुलुकमा विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न नसक्ने बताए ।
राजतन्त्रको समयमा जस्तै विद्यमान अर्थ व्यवस्था र सामाजिक व्यवस्थालाई पोस्ने खालको नीति लिएर सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू अघि बढिरहेको आरोप उनीहरूले बताए ।
आफूलाई बीपी र पुष्पलालको अनुयायी भन्नेहरूले समाजवादको खोल मात्रै ओढेको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
वीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं जन निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको ३७ औं तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४१ औं स्मृति दिवसको अवसरमा विमर्शको आयोजना गरिएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा समाजवादको वकालत गर्दै आएका प्रखर वक्ताहरूलाई बोलाइएको थियो ।
पटक–पटक भएका जन आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि दलित, जनजाति सीमान्तकृत वर्गको अवस्था उस्तै रहेको ठहर उनीहरूको छ।
उनीहरूले सबै राजनीतिक दलभित्रका नेता कार्यकर्तामा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र नेताको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने सामर्थ्य विकास हुनु जरुरी रहेको बताए ।
आफूलाई बीपी र पुष्पलालका अनुयायी भन्नेहरूले उनीहरूको जीवनशैलीको अनुशरण गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
वर्तमान राजनीतिक चरित्रको बारेमा सबैखाले जनताले प्रश्न गरिरहेको तर्फ सचेत हुन नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले आग्रह गरे ।
“अहिलेको व्यवस्थाले पुगेको छैन, सबैले प्रश्न गरिरहेका छन्, विद्यार्थीले, युवकले, शिक्षकले, प्राध्यापकले प्रश्न गर्दैछन्, खाएकाले प्रश्न गर्दैछन्, नखाएकाले प्रश्न गरिरहेका छन्”, नेता गिरिले भने, “यसका लागि हामीले परिवर्तन गरेको होइन त ? जुन बिहानी भनेर हिंडेका त्यो त यो बिहानी होइन नि भन्दैछन् ।”
दलहरूले सपना देखाएको तर पूरा नगरेको उनको भनाइ छ । “१२ वर्षसम्म सशस्त्र आन्दोलनबाट आएको माओवादीले कत्रा कत्रा सपना देखाए, त्यसैगरी एमालेले देखायो, कांग्रेसले देखाएका त पुराना भइसके । यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं, भने । तर कति पूरा गरेका छन् त ? सांसद त बदलिएका छन्, प्रधानमन्त्री पनि बदलिए तर राज्यको संरचना बदलिएन”, उनले भने ।
कम्तीमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र विपक्षी दलका नेताको जिन्दगी सादगी हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
“हामीले पनि दलित, सीमान्तकृत मधेशीलाई देखाएर माथि पुग्ने र उनीहरूले जस्तै गर्‍यौं र त बदनाम भयौं । राजनीतिक परिभाषामा हामीले गणतन्त्र पाएका छौं तर एक भोट नै मताधिकार भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र आम नागरिकको आर्थिक सामाजिक जीवनमा समानता छ त ? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।”
नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले वर्तमान राजनीतिक दलको संयन्त्र र चुनावी तरीका समाजवाद उन्मुख नभएको टिप्पणी गरे ।
“लोकतान्त्रिक क्रान्ति पछि सत्तामा पुग्नेहरूले राजतन्त्रमा जस्तै सामन्तवादलाई नै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेका छन्, दलाल पूँजीपतिको गठबन्धनले नै राज्य चलाइरहेको छ”, उनले भने, “यसरी समाजवाद आउँदैन, समाजवाद ल्याउन दलाल पूँजीवादको संगठनलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ।”
समाजवादको नारा लिएको कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा गएर उसले के गरिरहेको छ जनताले हेरिरहेको उनको भनाइ छ । “०४६ सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा कतिपटक सरकारमा गयौं, हामीले सरकार कति बदल्यौं, दलाल पूँजीपतिको गठबन्धनसँग कत्तिको प्रभावित भयौं ।”
उनले भने, “हामीले पनि दलित, सीमान्तकृत मधेशीलाई देखाएर माथि पुग्ने र उनीहरूले जस्तै गर्‍यौं र त बदनाम भयौं । राजनीतिक परिभाषामा हामीले गणतन्त्र पाएका छौं तर एक भोट नै मताधिकार भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र आम नागरिकको आर्थिक सामाजिक जीवनमा समानता छ त ? समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।”
नेकपाकै अर्का नेता राम कार्कीले पार्टी ठूलो हुँदै जाँदा समाजवाद हराउँदै गएको टिप्पणी गरे । “सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन कमीकमजोरी पनि केलाउनुपर्छ तर हामीले त्यसो गरेनौं, पार्टी सानो हुँदा जनवाद थियो, ठूलो हुँदै गएपछि हराउँदै गइरहेको छ, हाम्रो पार्टी अहिले निकै ठूलो भएको छ तर कार्यकर्तामा जनवाद हराउँदै छ ।”
उनले भने, “सिद्धान्तमा प्रश्न गरौं, त्यसलाई परिमार्जन गरौं, मन्थन गरौं, विष पनि निस्कन्छ, अमृत पनि । समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी लैजाने छलफल शुरु गरौं । तलको परिवेश आलोचनात्मक भएपछि नेताहरूको पक्कै होस खुल्छ ।”
उनले किसान मजदूरका लागि लडेको भनेर राजाको जस्तो रवाफ देखाउने धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरे ।